Afrikaan biyyoota 57 qabdi. Itiyoophiyaa, keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Moritaaniyaa, Egypt ykn Masrii fi biyyoota biroo… Baay’ini ummata biyyoota 57n keeysatti argamuu, baay’ina ummata Chaayinaatii gad akka tahe quba qabduu?
Chaayinaan bara 2017tti, Ummata Biiliyoona 1.4 qabdi. Baay’inni ummata biyoota afrikaa shantamii afranii walirratti, Biiliyoona 1.2 taha. Kanaafuu ummanni chaayinaa ummata ardii afrikaa guutuu irra jiru miiliyoona dhibba 2 oliin caala jechuudha.
Gama lakkofsa ummataatiin Indiyaanis ardii afrikaa ni caalti. Indiyaan Baay’ina ummataatiin, chaayinatti aantee sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Baay’inni ummata indiyaa bara 2017tti Biiliyoona 1.35 yoo tahu, baay’ina ummata ardii afrikaa guutuu miiliyoona dhibba tokkoo fi miiliyoona shantaamaan caala jechu.
Ummanni Biyya Masrii ykn Egypt, dachii biyyattiin qabdu keeysaa dhibbentaa 5.5 qofa irra jiraata. Dachiin dhibeentaa 94.5 tahu gammoojjii qullaadha. Lammiileen Masrii kan dhibbentaa 99 tahan, qarqara laga Naayil irra qubatu. Sababa kanaaf lagni Naayil ummata Masriitiif lubbuudha jedhama. Laga Naayil malee ummanni biyyattii jiraachuu hin dandahu.
Riqicha Daan yang Kunshan Grand Bridge
Riqichi dheeraan isin ijaan argitan hagam dheerata? Riqichi dheeraan dachii tanaa chaayinaa keeysatti argama. Riqichi kun Daan yang Kunshan Grand Bridge je’amuudhaan beekama.
Dheerinni isaa Kiiloomeetira 165 hogguu tahu, kana jechuun Finfinneerraa hanga naannawa matahaaraatti dhihaata jechu. Takkaahuu Finfinneerraa hanga magaalaa Baatuu ykn Zuwaay dheerata. Ijaarsa riqicha kanaa namoota 10,000 oltu irratti hirmaate. Bara 2008 eegalamee, waggaa 4 booda bara 2011 hojii eegale.
December 1, 2021 sa;aa 11:50 pm Update tahe